Mitambo nemaapplication emahara kana pakutengeswa kwenguva yakatarwa | IPhone nhau
Nhasi muActualidad iPhone ndinokuunzira isinganzwisisike kusarudzwa kwemitambo yemahara kana yakaderedzwa uye kunyorera kwe iPhone, iPad uye iPod Kubata. Pane zvishoma zvezvinhu zvese, kubva kumitambo yevana vadiki kuenda kuhondo dzine ropa, pamwe nemaapplication echinhu chero chaunogona kufungidzira.
Rangarira kuti idzi mitengo ndedzenguva shoma. Ini ndinogona chete kuvimbisa izvozvo Zvipo zviripo panguva yekuburitsa ichi posvo sezvo vagadziri vasingaratidze kana kusimudzira kwapera. Naizvozvo, kana paine chero chavanofarira iwe, usazeze kwechipiri kuti ubate icho.
1 Yemahara mitambo uye maapplication
1.1 2D - Penda, Dhirowa, Sketch, Collage
1.2 VoiceClock - Kutaura
1.3 Virtual USB Disk uye File Explorer [Pro]
1.4 Nyowani Reversi - Othello Senge Strategy uye Logic Bhodhi Mutambo
1.5 Super Tank Hondo
1.6 Keymoji: Emoji Khibhodi
1.7 Photo Eraser - Bvisa Zvisingadiwe Zvinhu kubva Mifananidzo
1.8 Arufabheti Mota
1.10 Mwana Piano HD
1.11 Alfabheti Mota 2 HD Yekutanga
2 Mitengo yakadzikiswa uye maapp
2.3 MetaMoJi Cherekedza - chinyorwa kutora uye PDF annotation app
2.4 CHAOS Rings Ⅲ
2.5 Caramel - Crunch uye Crusher Mhedzisiro processor
2.7 FINAL FANTASY Ⅸ
Yemahara mitambo uye maapplication
Iyi inotevera mitambo uye kunyorera zvakabhadharwa, asi kana iwe uchimhanyisa unogona kuzviwana mahara. Wakamirira chii?
2D - Penda, Dhirowa, Sketch, Collage
«Iyo nyowani Art App yeVagadziri uye maArmist avo vanoda chimwe chinhu kupfuura chaicho chishandiso kuPendi uye Dhirowa».
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 3,99 euros uye ikozvino unogona kuikanda mahara.
VoiceClock - Kutaura
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 0,99 euros uye ikozvino unogona kuikanda mahara.
Virtual USB Disk uye File Explorer [Pro]
A virtual hard drive ye iPhone yako nePadad kwaunogona kusevha ese marudzi ezvinyorwa, odhiyo, vhidhiyo mafaera, uzvione, uzvitendese uye kunyange kuzvidzivirira ne password.
Nyowani Reversi - Othello Senge Strategy uye Logic Bhodhi Mutambo
Mutambo webhodhi maunofanira kuisa kufunga kwako zvine hungwaru uye pfungwa kuzviedzo.
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 2,99 euros uye ikozvino unogona kuikanda mahara.
Mutambo wekunakidza muhondo umo tangi iri protagonist huru.
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 4,99 euros uye ikozvino unogona kuikanda mahara.
Keymoji: Emoji Khibhodi
Keymoji inosarudzika yeIOS uye dudzira mune chaiyo nguva zvese zvaunonyora mune chero chishandiso kuita emoji, Kubva kune inogara ichikura emoji keyboard kudhizaina kudhirowa duramazwi. Pasina kufunga nezve emoji yakakodzera kwazvo.
Keymoji inoshanda mukati meSnapchat, Facebook, WhatsApp, Email, iMessage, Kik, Line, Kakao Talk, WeChat, Notes, Twitter, nezvimwe.
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 9,99 euros uye ikozvino unogona kuikanda mahara.
Photo Eraser - Bvisa Zvisingadiwe Zvinhu kubva Mifananidzo
Photo Eraser iri nyore kushandisa mufananidzo mupepeti uyo bvisa zvisingadiwe zvinhu, vanhu, zvinyorwa, masiginecha, watermark, kusakwana kweganda, zvivakwa kana chero chimwe chinhu kubva kumifananidzo yako. «Iwe chete unofanirwa kumaka nzvimbo dzisingadiwe neruvara rutsvuku; Photo Eraser ichagadzirisa yako pikicha pasina nguva.
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 1,99 euros uye ikozvino unogona kuikanda mahara.
"Tsvaga mavara akakodzera kushoko rakapihwa uchishandisa nharembozha yako seflaya uye ita kuti mwana wako adzidze kuperetera nenzira inonakidza uye inobata."
Iyo scanner ye iPhone yako kana iyo iPad iyo inobvumidza iwe kushandura uye kugovana zvese zvinyorwa, mapikicha, nezvimwe izvo zvaunotarisa kuPDF fomati.
Mwana Piano HD
Alfabheti Mota 2 HD Yekutanga
Mitengo yakadzikiswa uye maapp
Mutengo waro wenguva dzose ndi4,99 euros uye ikozvino unogona kuikanda iyo chete € 1,99.
Mutengo waro wenguva dzose ma1,99 euros uye ikozvino unogona kuidhonza chete € 0,99.
MetaMoJi Cherekedza - chinyorwa kutora uye PDF annotation app
Mutengo waro wenguva dzose ma7,99 euros uye ikozvino unogona kuidhonza chete € 4,99.
Mutengo waro wenguva dzose ma19,99 euros uye ikozvino unogona kuidhonza chete € 9,99.
Caramel - Crunch uye Crusher Mhedzisiro processor
Mutengo waro wenguva dzose ma4,99 euros uye ikozvino unogona kuidhonza chete € 2,99.
Mutengo waro wenguva dzose ma20,99 euros uye ikozvino unogona kuidhonza chete € 16,99.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutengesa » Mitambo nemaapplication emahara kana pakutengeswa kwenguva shoma
Wedzera iyo Bata Bhawa pane iyo Mac yekutenda kune iyo iPad uye iyo Duet Ratidza kunyorera